अकादमी पुरस्कारको लागि पुस्तक छनोट गर्ने एक ज्युरी सदस्यको आयो यस्तो बयान : 'म हारें'- मनप्रसाद सुब्बा - खबरम्यागजिन
Homeखबरअकादमी पुरस्कारको लागि पुस्तक छनोट गर्ने एक ज्युरी सदस्यको आयो यस्तो बयान : ‘म हारें’- मनप्रसाद सुब्बा
‘आफ्नै मनका परदेशहरु तथा जून जस्तै घाम-का निम्ति मैले लडेको युद्ध म हारेँ। क्षमा गर्नुहोस् भाइहरू ! अबदेखि उसो यस्तो जाली युद्ध म कहिले लड्ने छुइन,पहिले पनि एक चोटी गुप्त प्रधान र राजेन्द्र भण्डारीको निमित्त लडेको युद्ध यसरी नै हारेको थिएँ। र ती बासी विचारहरूको ‘विजय-पत्र’-मा मेरो तीब्र विमतिको सङ्केत हस्ताक्षर नगरी फर्केको थिएँ! यसपालि पनि विमति प्रकट गर्दै हस्ताक्षर नगरी फर्कें! अब चैं काबु जुरी मेम्बरको नोमिनेसन थाप्नु।’
आजमात्र साहित्य अकादमीले किन रोयौ उपमा नामक कथा सङ्ग्रहको निम्ति लोकनाथ उपाध्याय चापागाईँलाई अकादमी पुरस्कार दिएको घोषणा गरेको थियो। अकादमीले सार्वजनिक गरेको ज्युरीको नाममा बीणा हाङ्खिम, दुर्गा खतिवडा अनि मनप्रसाद सुब्बा छन्। तीन ज्युरी सदस्यमध्ये एक मनप्रसाद सुब्बाले अकादमी पुरस्कार घोषणा भए लगत्तै फेसबुकमा स्टाटस हालेर आफू हार्न परेको आत्मस्वीकृति प्रकट गरेका छन्।
‘प्रिय प्रवीण जुमेली भाइ अनि सञ्जय विष्ट भाइ, तपाईँहरूको निम्ति लडेको युद्ध मैले हारें,’ सुब्बाले लेखेका छन्, ‘यो युद्ध थियो पुरातनवादी र समकालीनतामाझ। उनीहरूसित ठँस्स गन्हाउने बासी शब्दसहित अरू अस्त्र थियो, तर मसित समकालीन शब्द सिवांय केही थिएन र म हारें।’
सुब्बाले स्पष्टसित सङ्केत गरेका छन्, ज्युरीले यसपल्ट पनि उत्कृष्ट पुस्तकलाई पुरस्कार दिएन। सुब्बाको सङ्केत छ, दिइनुपर्ने पुस्तकलाई पुरस्कार दिइएन। सुब्बाले आफूले छनोट गरेको पुस्तक र लेखकको नाम नै उल्लेख गरेका छन्। सञ्जय विष्टको जूनजस्तै घाम र प्रवीण राई जुमेलको आफ्नै मनका परदेशहरू, जसले यसवर्षको पुरस्कार पाउनुपर्ने हो। तर सुब्बा पुरातनवादी विचारधारा बोकेकै ज्युरी सदस्यहरूसित हार्नु पऱ्यो।
तीनजना ज्युरी सदस्यमा बहुसंख्यकले दिएको मतबाट नै पुरस्कृत कृति छानिने अकादमीको नियम छ। यस्तो नियम हुने वित्तिकै त्यहाँ लबी र चलखेलको लागि स्पेस बनेको सबैले अनुभव गरेकै छन्। दुइ ज्युरी सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पारेर लबीकर्ताले पुरस्कार आफूले चाहेको पुस्तकलाई प्रदान गराउने खेल खेल्न सक्ने स्पेसबीच सँधै उत्कृष्ट पुस्तक किनारीकृत हुनुपरेको पनि सबैले अनुभव गरिरहेकै छन्।
दुइ सदस्यले जस्तै कमसल पुस्तकबारे एकमत राखुन्, पुरस्कार उसैको हो। ‘आफ्नै मनका परदेशहरु तथा जून जस्तै घाम-का निम्ति मैले लडेको युद्ध म हारेँ। क्षमा गर्नुहोस् भाइहरू ! अबदेखि उसो यस्तो जाली युद्ध म कहिले लड्ने छुइन,’ सुब्बाले चरम निराशा र अन्सतुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘पहिले पनि एक चोटी गुप्त प्रधान र राजेन्द्र भण्डारीको निमित्त लडेको युद्ध यसरी नै हारेको थिएँ। र ती बासी विचारहरूको ‘विजय-पत्र’-मा मेरो तीब्र विमतिको सङ्केत हस्ताक्षर नगरी फर्केको थिएँ! यसपालि पनि विमति प्रकट गर्दै हस्ताक्षर नगरी फर्कें! अब चैं काबु जुरी मेम्बरको नोमिनेसन थाप्नु।’
अकादमी पुरस्कार अधिकांश विवादमा पर्ने गर्छ। अदाकमी परामर्श समितिको चलखेलको कारणले नै उत्कृष्ट पुस्तकहरू पुरस्कार पाउनुबाट बञ्चित बन्नुपरेको गुनासोहरू निरन्तर सुनिन्छ। एकपल्ट राजेन्द्र भण्डारी, महेन्द्र पी लामा अनि डा. घनश्याम नेपाल ज्युरी रहेको बेला परामर्श समितिले उत्कृष्ट पुस्तक नै नपठाएकोले पुरस्कार नै छनौट भएन।
अकादमी परामर्श समितिको संयोजक छानिने प्रक्रियामा नै व्यापक लबी चल्ने गरेकोले यसपल्ट पनि धेरैवर्षदेखि संयोजक बस्दै आइरहेका डा. जीवन नाम्दुङ नै संयोजक बनेका छन्। उनी संयोजक रहेको समयमा प्रायः नै अकादमी पुरस्कार विवादमा पर्ने गर्छ।
यसपल्ट पनि सुब्बाले सही र उत्कृष्ट पुस्तकले पुरस्कार नपाएको सङ्केत दिएका छन्।